Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း)
Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း) ကဘာလဲ။
Hepatomegaly ဟာ အသည်းကြီးတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းကြီးခြင်းဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတွေရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီအခြေအနေဟာ ရှားပါးပြီး အသက်ကြီးသူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Hepatomegaly ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်း
Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အရက်ကြောင့် ဖြစ်သော အသည်းရောဂါများ
အရက်ကြောင့် မဟုတ်သော အသည်းရောဂါများ
အသည်းရောင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး (အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊ အီး)
အသည်းကင်ဆာ၊ အခြားနေရာတွေမှ အသည်းသို့ ပြန့်လာသောကင်ဆာ
အသည်းကြီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဖြစ်နည်းတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့
အချို့ lymphoma များ
အသည်းကို သွားသော သွေးပြန်ကြောပိတ်ခြင်း (Budd- Chiari syndrome)
အသည်း အနာဖြစ်ခြင်း (အမီးဘားပိုး၊ ဘက်တီးရီးယား)
ကိုယ်ခန္ဓါရှိ lice လို အကောင်မျိုးမှ ကူးစက်ခံရသော relapsing fever
ဆေးကြောင့် ဖြစ်သော အသည်းပျက်စီခြင်း (acetaminophen (Tylenol, others) နဲ့ amoxicillin-clavulanate (Augmentin, Amoclans))
အဆိပ်ဖြစ်စေသော စက်ရုံတွေမှ ထွက်သာ ဓါတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ tetrachloride နဲ့ chloroform ကြောင့် အသည်းအဆိပ်သင့်ခြင်း
ရှုပ်ထွေးသော အသည်းနှင့် စနစ်တစ်ခုလုံးထိသော ရောဂါများ
Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Hepatomegaly ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အရက်အလွန်သောက်ခြင်း – အရက်အလွန်သောက်ခြင်းဟာ အသည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆေး၊ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်တွေ အများအပြား သောက်ခြင်း။ လိုအပ်သည်ထက်ပိုပြီး
ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေဖြစ်တဲ့ comfrey,ma huangနဲ့ mistletoe တို့ဟာ အသည်းပျက်စီးနှုန်းကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဖြစ်နိုင်တဲ့ အသည်းရောဂါကို ရှာဖွေစမ်းသပ်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်က နံရိုးရဲ့အောက် ဗိုက်အပေါ်ညာဘက်ပိုင်းမှာ အသည်းရဲ့ အစွန်းကို စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပြီး သူ့အရွယ်အစား၊ ပုံစံ၊ နာကျင်မှု ရှိမရှိကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး ကြီးနေတဲ့အသည်းဟာ ပျော့ခြင်း၊ မာခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းတွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အကျိတ်တွေကိုလည်း စမ်းမိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုစစ်ဆေးခြင်းဟာ အသည်းအရွယ်အစားကို အကြမ်းမျဉ်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။ သေချာအောင်သိဖို့တော့ abdominal ultrasound ကစပြီး imaging tests တွေ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမို အသေးစိတ်တဲ့ ပုံရိပ်တွေ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် CT scan နဲ့ MRI တို့ကို လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်က အသည်းကြီးပြီလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အခြားအကြောင်းရင်းတွေကိုရှာဖို့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကတော့
သွေးစစ်ဆေးခြင်း – သွေးစစ်ဆေးမှုဟာ အသည်းအင်ဇိုင်းပမာဏကို တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သင့်အသည်းကျန်းမာရေးအကြောင်းကို အရိပ်အမြွက်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေဟာ အသည်းကြီးခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အသည်းရောင်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Magnetic resonance elastography ဟာ shear waves တွေကို အသုံးပြုပြီး အသည်းမာခြင်းကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးမှုဟာ ခွဲစိတ်ဖို့မလိုအပ်တာကြောင့် အသည်းအသားစယူခြင်းအစား သုံးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းအသားစယူခြင်း – သင့်ဆရာဝန်ဟာ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စစ်ဆေးဖို့ အသည်းအသားစ ယူနိုင်ပါတယ်။ အသည်းအသားစ ယူခြင်းကို သေးငယ်တဲ့ အပ်နဲ့ အရေပြားကို ဖေါက်ကာ အသည်းအတွင်းကို စိုက်ပြီး ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ အပ်ဟာ အသည်းရဲ့ အဓိက တစ်ရှူးကို စုပ်ယူပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းကို ပို့တာ စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က Ultrasound နဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုရတဲ့ အသားစယူခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Hepatomegaly (အသည်းကြီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အသည်းကြီးခြင်းကို ကုသခြင်းဟာ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တဲ့ အရက်ကြောင့်နဲ့ အရက်ကြောင့် မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်းတွေမှာ အရက်ကိုရှောင်ခြင်း၊ ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သိသာစွာ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Hepatomegaly ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ပါ။ အသီးအရွက်၊ whole grains ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသင့်ပါတယ်။
အရက်ကို အလယ်အလတ်သာသောက်ပါ။ သင့်အတွက် ဘယ်လောက်သောက်သင့်သလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
ဆေး၊ ဗီတာမင်၊ ဖြည့်စွက်စာတွေ အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါ။ အကြံပြုထားတဲ့ ပမာဏကိုသာ အသုံးပြုပါ။
ဓါတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိမိခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ aerosol cleaners၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ အခြားအဆိပ်ရှိတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
လက်အိပ်၊ လက်ရှည် နဲ့ မျက်နှာစွပ်တို့ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ တကယ်လို့ သင့်အလေးချိန်က ပုံမှန်ပဲဆိုရင် ကြိုးစားပြီး ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်လေးချိန်လျှော့ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့ သင်စားနေတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲက တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီနည်းနည်းစီလျှော့ချသင့်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာစွာ ဘယ်လိုကိုယ်အလေးချိန်လျှော့သင့်သလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက်စာတွေကို သတိနဲ့ အသုံးပြုပါ။ ဖြည့်စွက်စာတွေ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေကို အသုံးမပြုခင် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကို နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားပါ။
ဒီထုတ်ကုန်တွေဟာ အသည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓါတောင့်တင်းဆေး၊ ပိန်ဆေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ အသည်းကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ အပင်တွေကတော့ germander, chaparral, senna, mistletoe, comfrey, ma huang, valerian root, kava, celandine နဲ့ green tea extracts တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Enlarged Liver http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/enlarged-liver/basics/definition/con-20024769. Accessed July 22, 2016.
Hepatomegaly http://www.healthline.com/symptom/liver-enlarged. Accessed July 22, 2016.
Hepatomegaly https://medlineplus.gov/ency/article/003275.htm. Accessed July 22, 2016.